သွေးကင်ဆာခံစားနေရတဲ့ (၈)နှစ်အရွယ် ကလေးလေးအတွက် ဆေးကုသစရိတ်ကိုမွေးနေ့အလှူ အနေနဲ့ မတည်လှူဒါန်းပေးလိုက်တဲ့ အမွန်း – Cele Oscar
သွေးကင်ဆာခံစားနေရတဲ့ (၈)နှစ်အရွယ် ကလေးလေးအတွက် ဆေးကုသစရိတ်ကိုမွေးနေ့အလှူ အနေနဲ့ မတည်လှူဒါန်းပေးလိုက်တဲ့ အမွန်း
January 19, 2021 By L YC News
ပရိသတ်ကြီး ရေ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အချစ်တော် အမွန်းက တော့ ဒီနေ့ ဇန်နဝါရီလ (၁၉)ရက်မှာ ကျရောက် တဲ့ မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အနေ နဲ့ မွန်မြတ်လှတဲ့ အလှူလေး တစ်ခု ကိုပြုလုပ်ခဲ့ ပါတယ်။ အလှူလေး ကတော့ သွေးကင်ဆာ ရောဂါခံစားနေရတဲ့ (၈) နှစ်အရွယ် သမီးငယ်လေး အတွက် ဆေးကုသစရိတ် ကိုတတ်နိုင် သလောက် လှူဒါန်းပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမွန်းက ဒီနေ့ မွေးနေ့ ရက်လေးလေးမှာ အသက် (၃၀) ပြည့်မြောက်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ကလေးငယ်လေး အတွက်ကိုလည်း သိန်း(၃၀) တိတိ မတည်လှူဒါန်းပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမွန်း ရဲ့ မွေးနေ့ အလှူလေး ကတော့ အနာဂတ်တွေ များစွာ နေတဲ့ လူ့အသက် တစ်ချောင်းကို ကယ်တင်တဲ့ အလှူလေး ဖြစ်တာကြောင့် တကယ်ကိုမှ မွန်မြတ်လွန်းလှတဲ့ အလှူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံရပ်ခြား အထိ သွားရောက် ကုသရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆေးကုသ ကုန်ကျစရိတ်က များလွန်းလှတဲ့ အတွက် ပရိသတ်တွေကို လည်း ပါဝင်လှူဒါန်းဖို့လည်း ဖိတ်ခေါ်ထားခဲ့ ပါသေးတယ်။ Cele Gabar ပရိသတ်ကြီး ရေ အမွန်းရဲ့ မွန်မြတ်လှတဲ့ မွေးနေ့ အလှူလေးကို သာဓု ခေါ်ဆို ပေးခဲ့ကြပါဦး ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ။
Source – Ah Moon
ပရိသတျကွီး ရေ ပရိသတျတှေ ရဲ့ အခဈြတျော အမှနျးက တော့ ဒီနေ့ ဇနျနဝါရီလ (၁၉)ရကျမှာ ကရြောကျ တဲ့ မှေးနေ့ အထိမျးအမှတျအနေ နဲ့ မှနျမွတျလှတဲ့ အလှူလေး တဈခု ကိုပွုလုပျခဲ့ ပါတယျ။ အလှူလေး ကတော့ သှေးကငျဆာ ရောဂါခံစားနရေတဲ့ (၈) နှဈအရှယျ သမီးငယျလေး အတှကျ ဆေးကုသစရိတျ ကိုတတျနိုငျ သလောကျ လှူဒါနျးပေးခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အမှနျးက ဒီနေ့ မှေးနေ့ ရကျလေးလေးမှာ အသကျ (၃၀) ပွညျ့မွောကျသှားခဲ့တာ ဖွဈပွီး ကလေးငယျလေး အတှကျကိုလညျး သိနျး(၃၀) တိတိ မတညျလှူဒါနျးပေးခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ အမှနျး ရဲ့ မှေးနေ့ အလှူလေး ကတော့ အနာဂတျတှေ မြားစှာ နတေဲ့ လူ့အသကျ တဈခြောငျးကို ကယျတငျတဲ့ အလှူလေး ဖွဈတာကွောငျ့ တကယျကိုမှ မှနျမွတျလှနျးလှတဲ့ အလှူလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။
နိုငျငံရပျခွား အထိ သှားရောကျ ကုသရမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျ ဆေးကုသ ကုနျကစြရိတျက မြားလှနျးလှတဲ့ အတှကျ ပရိသတျတှကေို လညျး ပါဝငျလှူဒါနျးဖို့လညျး ဖိတျချေါထားခဲ့ ပါသေးတယျ။ Cele Gabar ပရိသတျကွီး ရေ အမှနျးရဲ့ မှနျမွတျလှတဲ့ မှေးနေ့ အလှူလေးကို သာဓု ချေါဆို ပေးခဲ့ကွပါဦး ပရိသတျကွီးတို့ရေ။
ကမ္ဘာအနှံ့ချစ်ရတဲ့ခင်ပွန်း နဲ့ နှစ်ယောက်တည်းသွားခဲ့တဲ့ အမှတ်တရပုံလေးတွေကို ချပြလာတဲ့ မြတ်ရတနာကျော်
အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့နှစ်ထပ်တိုက်အသစ် နဲ့ ခြံကြီးကို ပရိတ်သတ်တွေကိုသိစေချင်လို့ ချပြလာတဲ့ လင်းလင်းရဲ့ဗီဒီယို
Mrs Universe 2021 World Final ပွဲကိုခင်ပွန်းကိုယ်တိုင် မိတ်ကပ် နှင့် ဆံထုံးပြင်ပေးခဲ့လို့ ဂုဏ်ယူနေတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်အလှမယ် ဟန်နီချို……
ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမှ ပြတ်သွားလို့ တစ်ယောက်တည်း နေတော့မယ်ဆိုပြီး ရင်ဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ နိုင်းနိုင်းရဲ့ ညီမလေး ဖူးဖူး….
အရမ်းချစ်ရတဲ့ ကြောင်ကလေး အိပ်နေတယ် လို့ပဲ ထင်ခဲ့တာ ထွက်ခွါချိန် စောလွန်းတယ် ကလေးရယ်ဆိုပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရှာတဲ့ ပိုင်တံခွန်…..
ထိုင်းနိုင်ငံက အလှူရှင်တွေကိုယ်စား ငွေကျပ် သိန်း(၂၀) ကိုဂျမ်းတောလေးတို့ သားအဖအတွက်သွားပေးခဲ့တဲ့ စည်သူပလပ်ကျွတ် ရုပ်သံဖိုင်….
COVID ကာလ တစ်လျှောက်လုပ်ငန်း လည်ပတ်နိုင်ဖို့ ဘဏ်က ယူထားတဲ့ အကြွေးတွေဆပ်နေရတယ်လို့ ပြောလာတဲ့ လှမျိုးသဉ္ဇာနွယ် ဗီဒီယို….